A Guide Full si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in Phones Android iyo murriyado
Ka dib helitaanka brand qalab cusub Android ah, oo kaliya si aad u ogaato in aad heeso, playlists, filimada iibsaday, iwm ku xayiran yihiin Lugood Library? Waa maxay nixi ah! Apple ma bixiso xal kasta oo ay u gudbiyaan music ka Lugood in Android, sidaas sameeya Google sidoo kale. Waa maxay sababta aan users u leeyihiin in ay dhibaato ay ka soo layna weyn u dhexeeya labada dhufto? Dhab ahaantii, ma aha in aad mar aad garan dhawr talo iyo tabaha sida heeso, videos, Lugood U, Podcasts, iyo in ka badan si ay u gudbiyaan ka Lugood in Android. Hoos waxaa ku qoran 3 siyaabo sahlan aad codsan kartaa in Lugood wareejiyo Android. Bonus: Halkan waa xal fudud oo ammaan ah si ay u gudbiyaan wixii xog ah oo u dhexeeya wax telefoonada, oo ay ku jiraan music. Eeg faahfaahinta.
Xalka 1. Music Transfer Gacanta ka Lugood in Android Devices
Xalka 2. Transfer Lugood Media Faylal ay si Android Qalabka 1 Click
Xalka 3. Top 4 Android Apps in aad nuqulka Lugood Media la Android Devices
Fiiro gaar ah: 3 siyaabood ayaa dhamaantood diyaar u ah songs, playlists, filimada, Lugood U, Podcasts, iyo in ka badan ka Lugood wareejiyo telefoonada Android iyo kiniiniyada. Si kastaba ha ahaatee, si ay u fududaato in aad barato sidii aad u samayn hawsha, hoos ku qoran waxaan soo qaadan doonaa sida loo ka Lugood wareejiyo music qalabka Android sida tusaale si ay u muujiyaan tallaabooyinka.
Haddii aad tahay qof familar la Lugood Library, markaas waa in aad ogtahay in aad diyaarin kartaa Lugood warbaahinta folder iyo badbaadin oo dhan files warbaahinta Lugood ee folder. Tani waa muujinta ah waa in aad ka faa'iideystaan. Marka aad leedahay heeso hal guuriyeen in folder, ka dibna waxa aad maamuli kartaa si aad u hesho Lugood Music gal ka kaaftoomi Android si xor ah. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu sida loo sameeyo isticmaalka Lugood warbaahinta folder inay ka Lugood wareejiyo music qalabka Android.
Tallaabada 1. Copy files si default Lugood warbaahinta galka
In Lugood, u tag Edit > Tixraaca ... > Advanced iyo hubi ikhtiyaarka files Copy in Lugood warbaahinta folder markii isagoo intaa ku daray in maktabadda . Marka aan sidaa yeelno, music, video iyo faylasha kale warbaahinta lagu kaydin doonaa si toos ah in folder warbaahinta. Sidaa awgeed, waxaad heli doontaa faylasha hal aad u baahan tahay in aad nuqulka in telefoonada aad Android ama kiniiniga. Hoos waxaa ku qoran ee default Lugood goobaha folder warbaahinta:
Windows 7: C: \_ Users \_ username \_ My Music \_ Lugood \_
Windows 8: C: \_ Users \_ username \_ My Music \_ Lugood \_
Tallaabada 2. Transfer music ka Lugood in Android telefoonada / kiniinno
Raadi meesha Lugood warbaahinta folder oo aan kor ku soo sheegnay. Buur telefoonka aad Android sida drive dibadda adag via cable USB ah. Ka dib markaas, guji si aad u furato My Computer ama Computer si uu u furo card SD qalab Android. Fur Lugood warbaahinta gal in aad nuqulka iyo heeso ee la soo dhaafay in qalabka Android aad.
Fiiro gaar ah: Mac ma ogaan karaa telefoonka Android ama kiniin sida PC Windows ma. Si aad u wareejin Lugood in Android on Mac, aad leedahay si aad u jeesanaynaa dadka qaar ka mid ah qalab dhinac saddexaad caawimaad. TunesGo Wondershare u Android oo aan kor ku soo sheegnay waa nooc ka mid ah qalab, aad isku dayi kartaa. Haddii aadan aqoon waxaad halkaas oo ay soo jeedin si loo caawiyo, waxaan u malaynayaa in aad si toos ah isku daydo in xal 2 .
* Faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka Xalka 1
Faa'iidada: sidan gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah oo dhan inaad yeeshaan kartaa adigoo aan wax qalab dhinac saddexaad caawimaad;
Qasaaraha: 1aad, sidaas laguma ka Lugood qalabka Android wareejin karaan playlists Lugood, 2nd, haddii aad leedahay a maktabadda Lugood ballaaran, ka dibna sidan degi doono meel aad u badan oo aad computer; 3aad, waxay qaadataa waqti aad u badan in aad nuqulka songs mid-by-ka mid ah qalabka Android aad.
Xalka 2. Transfer Lugood in Android Qalabka 1 Click
Si songs, filimada, Podcasts, Lugood U iyo ka badan wareejiyo ka Lugood Library in telefoonada Android ama kiniin ah, sida ugu dhaqsaha badan waa in la isticmaalo Lugood si ay Android Mac software kala iibsiga - Wondershare TunesGo , kaas oo awood kuu si ay u gudbiyaan music, playlist, podcasts, iyo Lugood U ka Lugood qalabka Android 1 click. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad ku wareejin kartaa music, filimada iyo playlists ka qalabka Android dib ugu Lugood.
Siidaysay Your Music - Music Transfer ka Lugood in Android Devices
Tallaabooyinka lagu Isticmaal TunesGo Wondershare si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in Android
Tallaabada 1 Calan qalab Android aad
Ku rakib iyo abuurtaan Lugood si ay Android software kala iibsiga ku saabsan Mac. Connect telefoonka Android ama kiniin aad Mac via cable USB ah. Orod software ah oo aad arki doonaa waxa uu soo bandhigay dhinaca midig ee Lugood.
Tallaabada 2 Transfer Music ka Lugood in Android
In uu furmo suuqa hoose, riix nidaameed tab. Waxaad ka heli labo doorasho. Mid ka mid ah waa in ay u hagaagsan maktabadda Dhan , kan kale waa playlists soo xulay . Dooro mid ka mid ah oo guji nidaameed si hagaagsan music, filimada, podcasts, Lugood U, bandhigyada TV oo dheeraad ah si aad u phone Android ama kiniin.
Haddii aadan jeclayn in ay adeegsado software desktop ama waqti badan in aad nuqulka files warbaahinta ka badan oo fayl ku qaataan gacanta qalabka Android aad, waxa kale oo aad isku dayi kartaa in ay barnaamijyadooda Android. Chine Kuwani ha aad u hagaagsan Lugood in Android wirelessly. Halkan, waxaan ku qor baxay hogaanka 4 Lugood in ay barnaamijyadooda u hagaagsan Android.
Android ay taageerayaan
1. AirSync: Lugood nidaameed & AirPlay Lacag 3.9 / 5 Android 2.2 iyo ilaa
2. hagaagsan Lugood leh android Lacag 3.2 / 5 Android 1.6 iyo ilaa
3. Lugood in ay Android-nidaameed Windows Free 4.0 / 5 Android 2.2 iyo ilaa
4. iSyncr u Lugood in Android Lacag 4.5 / 5 Android 2.1 iyo ilaa
AirSync: Lugood nidaameed & AirPlay ka dhigaysa mid u fudud in ay u hagaagsan Lugood dhexeeya telefoonka Android ama kiniin iyo PC ama Mac wirelessly. Sida ka kooban, aad u hagaagsan kartaa music, playlists, iyo videos DRM-free la play soo oogay, ratings, iyo Macluumaad dheeraad ah. Macluumaad dheeraad ah, waxaad riixi kartaa xiriirka hoose. Download AirSync: Lugood nidaameed & AirPlay ka Google Play >>
2. hagaagsan Lugood leh android
Lugood hagaagsan oo android waa Android app yar. Sidaa daraadeed, aad awoodaan in ay si fudud u hagaagsan songs Lugood, MP3, playlist, videos iyo podcasts ka computer Windows in Android badan WiFi. Ka dib markii syncing, waxa aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay ugu raaxaystaan ​​warbaahinta Lugood ee aad taleefan Android ama miiska. Download Lugood hagaagsan oo android ka Google Play >>
3. Lugood in ay Android-nidaameed Windows
Sida ay magaceeda soo jeedin, app loo isticmaalo in u hagaagsan Lugood warbaahinta on computer Windows la phone Android ama kiniin. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si hagaagsan music, podcasts iyo videos maktabadda Lugood in qalab Android aad. Xogta kale, oo ay ku jiraan kuwan raadkaygay music, farshaxanka album, sidoo kale waxaa la mid aad u synced doonaa. Markaas, ka dib markii syncing, ayaad u habayn kartaa warbaahinta kuwaas oo files heesaa ama albums. Download Lugood in ay Android-nidaameed Windows ka Google Play >>
4. iSyncr u Lugood in Android
App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u hagaagsan Lugood ee Windows ama Mac OS 10.5 iyo ka dib la Android phone ama kiniin. Waxay ka dhigaysa mid u fudud in ay u hagaagsan music Lugood badan WiFi ama adigoo isticmaalaya cable USB ah. Waxaa music u hagaagsan ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale ka ciyaari dacwadood, ratings u hagaagsan, ka bood soo oogay, ee ugu danbeysay u ciyaaray taariikhda, iyo la soo dhaafay laga boodayo taariikhda ka Lugood in aad telefoon ama Android kiniin si aad playlists smart ilaa taariikhda. Download iSyncr u Lugood in Android ka Google Play Store >>
Articles More wareejiyo Music inay Android Devices
Best Android File Alternative Transfer Waxaad u
A Guide Full in nidaameed Android la Mac
Nidaameed Lugood leh Android Effortlessly
> Resource > Lugood > A Guide Full si ay u gudbiyaan Movies, Music iyo More ka Lugood in Android